Trojan Remover 5.8.1 ~ လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ်
Trojan Remover 5.8.1
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း က အကူအညီတောင်းလို့ ဒီ software ကလေးကိုရှာ ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စက်မှာ Trojan ကလေးများရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ အောက်က Software ကနေးနဲ့ သုံးပြီးတော့ ရှင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ.. အထဲမှာ လည်း Crack file ကလေးပါပါတယ် .။
Crack ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး winrar ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ ဖြည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အထဲမှာ cracked ဆိုတဲ့ file ကလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ အထဲက ဖိုင်တွေအားလုံးကို ကူးပြီးတော့ အောက်ကလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းသွားပြီးတော့ ကူးလာတာကလေးတွေကို ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ.
C -> program files-> trojan remover ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကလေးထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ.
တကယ်လို့များ ကိုယ်က window vista နဲ့ window7များသုံးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ စောစောက Cracked ဆိုတဲ့အထဲမှာ vista_inst ဆိုတဲ့ Bat file ကလေးရှိပါတယ်. အဲဒါကလေးကို run လိုက်ပါ ။ Run လိုက်ရင်တော့အဲဒီ့ အထဲမှာ ပဲ ဖိုင်က လေး ဖိုင်ကနေပြီးတော့ ၃ ဖိုင်ဖြစ်သွားပါ့မယ်။ အဲဒီ့ ၃ ဖိုင်ကိုမှ ကူးပြီးတော့
C -> program files-> trojan remover ဆိုတဲ့ ဖိုင်ထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ.. အောက်မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ.
Download Link =>> Multiupload
တကယ်လို့ Portable ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာယူလိုက်ပါ။
အော် အခုမှ သတိရလို့ Kaspersky အတွက် Key တွေကို အရင်တုန်းက www.kavkiskey.com ကနေပြီးတော့ ရပါတယ် .။ အခု အဲဒီ့ ဆိုဒ်ပုံစံမျိုး Kas key တွေကို www.hack-home.net မှာ ပေါပေါ သီသီ ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Posted on Saturday, January 30, 2010 by မောင်လုလင်
အကို နည်းနည်း ယူသွားတယ်နော်